Indawo yindawo! Oko kwaba yikhalazo sokuhlanganisela isizukulwana sabaphandi kunye nabanye abantu abaye bangenelela ekuhlaleni indawo. Ukukhala kwakuthatha into entsha xa i-Soviet Union ibetha i-US kwindawo kunye ne-Sputnik mission ngo-1957 kunye nomntu wokuqala ukuhamba ngo-1961. Inkqubo ye-Mercury space yenzelwa umzamo wokuqala wokuqala we-US ukuthumela abadlali bokuqala kwiindawo kwiminyaka yokuqala ye-Space Race.
Injongo yeprogram yayilula ngokulula, nangona loo misebenzi yayinzima. Iinjongo zaye zajikeleza umntu kwi-spacecraft ejikeleze umhlaba, uphando ngekhono lomntu lokusebenza kwithuba, kunye nokubuyisela kokubili i-astronaut ne-spacecraft ngokuphepha. Kwakungumngeni onzima ukufezekisa into eninzi ephuphayo malunga nabaza kubaphandi.
I-Origins of Space Travel ne-Mercury Programme
Akukho mntu oqinisekileyo xa abantu beqala ukuphupha ukuhamba kwendawo. Mhlawumbi yaqala xa uJohnnes Kepler ebhala waza wapapasha incwadi yakhe yaseSomnium . Mhlawumbi kwakusekuqaleni. Nangona kunjalo, bekungekho phakathi kwekhulu lama-20 ukuba iteknoloji yaphuhliswa kwinqanaba apho abantu bangatshintsha khona ingcamango kwi-hardware ukuze bafikelele kwi-flight space. Kwaqaliswa ngowe-1958, wagqitywa ngowe-1963, iProjekthi yeMercury yayiyinkqubo yokuqala yomntu wase-United States.
Ukudala iiMercury Missions
Emva kokusekela iinjongo zeprojekthi, i-NASA yathobela izikhokelo zeteknoloji eza kusetyenziswa kwiinkqubo zokuqalisa izithuba kunye nokusebenzisa iifowuni.
Igosa eligunyazisiweyo ukuba (naphi na ukusetyenziswa), iteknoloji ekhoyo kunye nezixhobo ezisecaleni kufuneka zisetyenziswe. Iinjineli zafuneka ukuba zithathe iindlela ezilula kunye nezithembekileyo kwiinkqubo zoyilo. Oku kuthetha ukuba ii-rockets ezikhoyo ziza kusetyenziswa ukuthatha iifomsile kwi-orbit.
Ekugqibeleni, i-arhente yakha inkqubo yokuhlola yokuqhubela phambili.
Umkhwa wendawo wawufanele wakhiwe ngokwaneleyo ukwenzela ukumelana nokugqithisa okukhulu nokulila ngexesha lokuqalisa, ukuhamba, nokubuyela. Kwaye kwafuneka ibe nenkqubo ethembekileyo yokuqalisa ukukhupha i-spacecraft kunye nabasebenzi bayo kwisithuthi sokuqalisa xa kwenzeka ukungaphumeleli. Oku kwakuthetha ukuba umqhubi kufuneka abe nokulawulwa kwendlela yokukhangela, umkhwa wecala kufuneka ube neprotrackcket ekwazi ukunyaniseka ukunika umkhwa wokukhupha, kwaye ukuyila kwayo kuya kuvumela ukuba isebenzise ukuqhuma kwe-drag drag for re- ukungena. Kwakhona kwakufuneka i-spacecraft ikwazi ukumelana nokuhla kwamanzi.
Nangona uninzi lwalo lufezekiswe kwi-shelf okanye izixhobo zeteknoloji esele ikhona, ubuchwepheshe obutsha bufuneka ukuba buphuhliswe. Beyinkqubo yokumisela ukunyanzeliswa kwegazi ekusebenzisweni kwendiza, kunye nezixhobo zokuqonda iingcinezelo zincinci zomoya kunye necarbon dioxide kwimoya ye-oxygen kunye neendawo zokuhlala.
Iinkqubo zeMercury zathi isigqibo sokuba iinkonzo zemikhosi ziza kunika abaqhubi bee-pilot kulo msebenzi omtsha. Emva kokuvavanya iirekhodi zesevisi ezingaphezu kwe-500 ekuqaleni kwe-1959, kwafunyanwa amadoda angama-110 adibeneyo nemigangatho emancinci. Phakathi kwe-Aprili yaseMelika yaseMelika ikhethiweyo yakhethwa, kwaye yaziwa ngokuba yi-Mercury 7.
BabengumScott Carpenter , uL. Gordon Cooper, uJohn H. Glenn Jr. , uVil Virgil I. "Gus" Grissom, uWalter H. "Wally" uSchirra Jr. , u-Alan B. Shepard Jr., nguDonald K. "Deke" uSlayton
Iprojekthi yeMercury yayinemihlangano emininzi yokuhlolwa kunye nokungabikho kwamanye amazwe. Owokuqala ukuphaphaza yiNkululeko 7, ethwele u-Alan B. Shepard kwi-flight flight, ngoMeyi 5, 1961. Wayelandelwa nguVilgil Grissom, owawucwangcisa iNkululeko ye - Liberty 7 kwi-flight submarital on July 21, 1961. I-Mercury mission yahamba ngoFebruwari 20, 1962, ithwele uJohn Glenn ibe yindiza ehamba emithathu e- Friendship 7 . Ukulandela indiza yeGlenn, i-astronaut uScott Carpenter ihamba nge-Aurora 7 ibe yi-orbit ngoMeyi 24, 1962, ilandelwa nguWally Schirra ukuya kwi- Sigma 7 ngo-Oktobha 3, 1962. Ukuthunywa kukaSchira kwahlala kwiimitha ezithandathu.
Umgqibelo wokugqibela weMercury wathatha uGordon Cooper waba ngumkhondo we-orbit 22 emhlabeni wonke kwi- Faith 7 ngoMeyi 15-16, 1963.
Ekupheleni kwexesha leMercury, i-NASA ilungiselele ukuqhubela phambili kunye nokuthunyelwa kweGemini, ekulungiseleleni imisebenzi ye-Apollo kwiNyanga. Iimbambano kunye namaqela asemhlabeni kwiimishini zeMercury zibonakalise ukuba abantu bangakwazi ukuhamba ngokukhuselekileyo kwindawo baze babuyele, kwaye babeka umgangatho wezinto ezininzi zobuchwepheshe kunye neenkqubo zokuhamba ezilandelwa yiNASA kuze kube namhlanje.
IiCubesats: i-Miniature Space Explorers
Ukubhiyozela iMicrosoft Exploration Rovers
Abantu abalahlwa ngumlilo
Indlela yokusebenzisa iifayile ezichazayo kwiiNqaku ezichazayo
Ndingayisebenzisa Ngendlela Efanelekileyo Yokuthenga I-Canvas?
Iimifanekiso ezidumile ze-Chuck Norris
Iintlanzi Zeenkonzo Zemfihlo
Uluphi Uhluko phakathi kweRadio yerhasi kunye neRondiyo yeIonic?
Iingqungquthela eziPhambili ezi-3 zokuLawula iGund
Umqhubi we-Scramble kwiGalofu: Yintoni okuyiyo, indlela yokudlala ngayo